hogaamiye siyaasadeed iyo diineed ee India
Mohandas Karamchand Gandhi (/ndi ˈɡæn-/; Af-Hindi: [ˈmoːɦənd̪aːs ˈkərəmtʃənd̪ ˈɡaːnd̪ʱi] ( dhageeyso); 2 Oktoober 1869 – 30 January 1948) wuxuu ahaa hogaamiye xisbi u dhaqdhaqaaqa xoriyada iyo madaxbanaanida wadanka Hindiya. Karmishaan Gandi oo lagu naanayso mahatma gandi (oo ay macneheedu tahay kii naftiisu aadka u waynayd am naftiisu muqadaska hayd)waxa uu dhashay (2 oktoobar 1869-30 janaayo 1948.) waa aabaha hindiyada iminka jirta waxa uu ku dhashay halka lagu magacaaboboorbandar.oo katirsan gobolka.gojaraat.waxa uu ka dhashay caailad Siyaasadda lug aad u dheer kulahayd xiligaas.halkaas oo awoowgii kasoo shaqeeyay aabihiina uga danbeeyay raisal wasaaraha meesha uu ku dhasahy ee.boor bandar oo ah ama ahyd xiligaasi imaarad madax banaan.waxa kale oo ay lahayd caailada gaandi ganacsi aad u balaadhan oo macruuf ahaa xiligaas.waxa uu guursaday markii uu cimrigiisu ahaa 13 sano kaliya.waxaanuu dhalay afar caruura.
(1869-10-02)2 Oktoobar 1869
Gobolka Porbandar, Kathiawar Agency, Boqortooyadii Ingiriiska
30. Janaayo 1948(1948-01-30) (da'da 78jir)
Hogaankii dhaqdhaqaaqa xornimo-doonka,
(g. 1883; geeriyooday(tay) 1944)
2 Aragtidiisii iyo fikradiisii
3 Iska caabinta bilaa rabshada ah
4 qoraaladii aadka u bedelay
5 Maxaa uuu Gaandi kayiri Islaamka
6 noloshiisii konfur afrika
gaandi waxa uu u safray wadanka ingiriiska sanadii 1882 si uu usoobarto qaanuunka.bilihii hore ee uu landhay ku qaatay waxa uu soomaray xaalad aad u adag.
gaandi waxa uu markii uu gaadhay landan isku dayay sidii uu ula qabsan lahaa ingiriiska am uu u noqonlahaa nin ingiriisa laakiin taasi uma suurto galin oo way ku adkaatay waanuu laqabsan waayay. kadib wacxa uu ogaaday in aanay kahoray in uu siadag oo dhibleh u shaeeyo mooyee waxkale.gaar ahaan xaaladiisa dhaqaale oo xumaatay kadib markii uu gaadhay london.waxa uu bilaabay in uu qaanuunka barto.oo uu u turjunto qoraalada si deeqaysa ma ku haboon caqliga shacabkiisa.
kadib waxa bilaabantay in qofnimada gandi ay soo shaacbaxdo.
gaandi waxa uu hindiya ku noqday sanadii.1890. kadib markii uu helay shahaado jaamacdeed u ogolaanaysa in uu ku shaqaysto looyarnimo.lakiinwaxa lasoo gudboonaaday dhibaatooyin aad u farabadan oo kabilaabmatay dhimashada hooyadii.iyo isaga oo ogaaday in looyarnimadu ay tahay dariiqo aan isaga guul u keenayan.kadib gandi waxa uu u safray wadanka koonfur afrika.oo ay markaas ka jirtay midab kalsooc aad u xumi.
Aragtidiisii iyo fikradiisii
gaandhi waxa uu aasaasay waxa maanta loo yaqaano iska caabinta ama muqaawmada.nabadaysan ee aan rabshadaha lahayn.amaba waxa looyaqaano (sanyaraha) oo ah guruub mabdayo ah oo ku dhisan aasas dhaqaale iyo mid diimeed iyo mid siyaasadeed oo markeliya isla jaan qaada.gogol dhigna waxa u ah geesinimo adkaysi iyo rabshad la aan.waxaanay hadaf ka dhiganaysay fakradaa gaandi burinta isticmaarka iyo guuldarao gaadhsiinta qabsadayaasha iyo waliba sidii dareenka dadka reer hindiya loo kicinlahaa.
Iska caabinta bilaa rabshada ah
Siyaasadda iska caabinta bilaa rabshadaha ahi waxa ay qaadanaysaa ama ay wadataa dhawr usluubood oo ay kamidtahay in lasoomo in iyo in dadwaynuhu ay usoodareeraan banaanada.iyo dhaga adayg ay geesinimo ku jirto.
qoraaladii aadka u bedelay
waxaa aad u waxyeeleeyay kadib markii uu akhriyay qaar badan oo kamida kutubtii ama buugtii xiligaa iyo mudadii kahoraysay laqoray ee lugta kulahayd falsafada iyo mabdaiisa.siyaasadeed.waxa kamida hees ama nashiido lagu magacaabi jiray (doobooy.) oo ahayd silsilad gabayeed ama buraanbur ay lahaayeen hinduusku. waxa laqoray gabaygan sadex iyo toban sano kahor dhalashaddii nabi ciise c.s. waxa uu gaandi kusheegay in ay tahay marjac ama meel uu ka shiidaaal qaato uu uu uga shiidaal qaato fikradiisan iska caabinta bilaa rabshada ha.waxakale oo kamid ahaa buugtaa uu gaandi shiidaalka ka qaafdan jiray buug la odhan jiray ilaa ninkii ugu danbeeyay. oo uu qoray qoraa ingiriisi.
Maxaa uuu Gaandi kayiri Islaamka
waxa uu mar yiri isaga oo ka hadlayay diinta islaamka waxa aan jeclahay in aan wax ka ogaado ninkaa bilaa rabshada ku kasbaday malaayiinta qof taasna waxa uu ula jeeday Nebi Muxamed nabad iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee.
waxa kale oo uu yidhi waxa aan si fiican ugu qanacsanahay in aanu islaamku ku kasban heeraka uu joogo seef. laakiin uu ku kasbaday tawaaduca rasuulka iyo runtiisa uu runta u sheegayay asxaabtiisa.
noloshiisii konfur afrika
gandi isaga iyo caailadiisuba waxa ay u safreen wadanka koonfur afrika markii ay taariikhdu ahayd . 1893.waxaana ay dageen gobolka nataal ee kuyaala badwaynta hindiya.gobolkaas waxa ay kadegeen magaaladiisa ugu wayn ee dorban.taas oo caanku hayd samaynta buuriga iyo sonkorta. halkaas ayuu gaandi waxa uu kashaqayn jiray difaacida dadka hunuuda ah ee shaqaalaha ah.waxay hunuudu xilgaas badanaa ka shaqaynjireen sonkorta. shaqaaluhuna xilgaas wuu kala qaybsanaa. waxa ay u qaybsanaayeen koox tujaara oo caraba.iyo qayb la adeegsado oo hindoos ah gaandi markuu uu halkaas gaadhay wax wara kama hayn wixii halkaas kasocday ee ahaa.cunsuriyad iyo dadka oo la adoonsado.laakiin markii uu maalmo kaliya joogay waxa uu gandi ogaaday xaqiiqada meesha kajirat.halkaas oo xiligaas xukuumadii cadaanka tirada yari uu ahystay dhiiri galinaysay sidii loosamayn lahaa takoor iyo gumaysi.waxaanay xukuumadaasi markaas ka shaqaynaysay sidii loo celionlahaa kumanaan kasoojeeda dalka eeshiya oo ay hunuudi u badantahay.
gaandi markaas waxa uu difaacay hunuuda iyo jaaliyadihii kale ee daciifka ahaa.gaandi waxa uu baranjiray.sida dadka loo badbaadiyo goorta ugu horaysa si uu u badbaadiyo dadka marka ay dhaawacyadu soo gaadhaan. gaandi waxa uu halkaas ka aasaasay jariidad loogu magacdaray rayiga dadka hunuuda ah. mahatama gaandi waxa uu waxa uu hindida ugu jiraa kaalin ama boos ay hindidu u arkaan in uu yahay aabaha hindiya.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahatma_Gandhi&oldid=219068"
Last edited on 10 Oktoobar 2021, at 19:56
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Oktoobar 2021, marka ee eheed 19:56.